मुख्य समाचार | Vetkhabar
काठमाडौं । कुखुराको दानाको भाउ वृद्धि गरिएको छ । ०७८ मंसिर १७ गते बसेको नेपाल दाना उद्योग संघको बैठकले दानाको मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । ब्रोइलरको दानामा प्रति केजी रु. ६.५० र लेयर्सको दानामा...
राजन प्रसाई काठमाडौं ।नेपालमा भिटामिनको नाममा पानी वेचेर किसानलाई ठगी गरी ठूलो धनराशी विदेश पलाएन गराउने गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइएको छ । नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेका ६ कम्पनीका पशुपन्छीको भिटामिन गुणस्तरहीन प्रमाणित भएसँगै यस्तो रहस्य...
राजन प्रसाई काठमाडौं । चर्चित बहुराष्ट्रिय कम्पनी भिरब्याकको भिटाब्लेन्ड डब्लू एम फोर्टसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको नक्कली भिटामिन नेपाली बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ । भारतीय कम्पनी इलिसिड फर्माले बहुराष्ट्रिय कम्पनी भिरब्याकको...
क्वालिटीले भित्रायो सासो प्यारेन्ट स्टक चल्लाको मेसिन, उत्पादन वैशाखबाट
काठमाडौं । सासो प्यारेन्ट चल्ला अब नेपालभित्रै उत्पादन हुने भएको छ । बालाजुस्थित क्लालिटी ह्याचरी प्रालिले देशभित्रै उत्पादन गर्न लागेको हो । क्वालिटीका सञ्चालक विजयभक्त मानन्धरले फ्रान्सबाट चल्ला उत्पादनका निम्ति सासो ग्राण्ड प्यारेन्ट आयात गरिसकिएको भेट...
डा. किसीको जीवनयात्राःआमाका लागि डाक्टरी, उपार्जनका निम्ति पोल्ट्री
आमा ! संसारकै सर्वप्रिय नाता । कतिपय सन्तति यस्ता हुन्छन्, जो आफ्नी आमाको खुसीका लागि सबै चीज समर्पण गरिदिन्छन् । सफल पोल्ट्री व्यवसायी डा. बलराम किसी यस्तै सन्तान हुन्, जसले आफ्नी आमाको शरीरमा साम्राज्य फैलाएको...
मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा भेटेरिनरी अस्पतालको शिलान्यास
तनहुँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ सेवा केन्द्रको शिलान्यास गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीत्रय मेखलाल श्रेष्ठ, डोवाटे विक र बिन्दु थापाको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले मङ्गलबार सो अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभएको...
कुकुर तिहार विशेष : पशुपतिमा जनचेतना, स्नेहाजमा पूजा
काठमाडौं ।यमपञ्चकको दोस्रो दिन अर्थात् कुकुर तिहार आज मनाइँदैछ । कुकुर तिहारको अवसरमा पूजाआजासँगै अन्य कार्यक्रमहरू पनि गरिँदैछ । स्नेहाज केयर सेल्टरले कुकुर तिहार विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ । बुधबार बिहान १० बजे भैंसेपाटीस्थित...
बिरामी भैँसीको मासु खाँदा डेढ सय जना बिरामी
रुपन्देही । रुपन्देहीमा बिरामी भैँसीको मासु खाँदा झन्डै डेढ सय जना बिरामी परेका छन।सैनामैना नगरपालिका–७, देउवापारमा बिरामी परेको भैँसीको मासु पकाएर खाँदा १४० जना एकसाथ बिरामी परेपछि गाउँ नै त्रसित बनेको छ । कुकुरले टोकेर...
पशुपन्छी औषधी व्यावसायी संघको अधिवेशन बुटवलमा
काठमाडौं । नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको १३ औं अधिवेशन लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा हुने तय भएको छ । संघको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी १६र १७ गते बुटवलमा केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको नेपाल...